सर्वोच्चले जे भन्छ, त्यही गरौंला भन्नु कसरी बेठिक हो? : रमेश लेखक [अन्तर्वार्ता]
किशोर दहाल/लिलु डुम्रे बिहीबार, माघ २२, २०७७, १५:५४
कांग्रेसको अस्पष्टता, विरोध प्रदर्शन, निर्वाचन नहुने परिस्थितिमा कांग्रेसको नीति, पार्टीको १४औं महाधिवेशन लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल लाइभका किशोर दहाल र लिलु डुम्रेले संस्थापन पक्षका नेता रमेश लेखकसँग गरेको संवादः
प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक हो भनेर पार्टीले भनिसकेको छ। विघटन नेकपाकै कारणले भएको हो। यसमा भ्रममा नपरौं। कम्युनिस्टहरुको अधिनायकवादी चरित्रका कारण विघटन भएको हो। कम्युनिस्टले ल्याएको राजनीतिक परिघटना हो। राजनीतिक घटना संविधानको सीमाभित्र घट्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई राजनीतिक रुपमै विश्लेषण गर्नुपर्दछ। अदालतको बहसको विषय वा बौद्धिक छलफलको विषय मात्रै बनायौं भने हामी कहीँ पनि पुग्दैनौं।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रियस सभा सदस्यका लागि सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन भएन। त्यसलाई थाती राखियो र केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि नयाँ नामहरु सिफारिस गरेर अनुमोदन गरियो। ओली प्रतिनिधि सभा सदस्यको सपथ नलिइकनै प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। सभामुख र उपसभामुख पनि एउटै दलको बनाउनुभयो। प्रदेश सभामा एउटै दलको सभामुख र उपसभामुख छन्। सभामुखको पद खाली भएपछि अर्को दललाई उपसभामुख दिनुभएन। बरु त्यो पदको निर्वाचन नै गराइएन।
बाहिर उठेका कुरा ठिक हो जस्तो मलाई लाग्दैन। कांग्रेसको धारण प्रष्ट छैन भन्ने कुरामा म सहमत हुन सक्दिनँ। प्रतिनिधि सभा विघटन अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक कदम हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौं। तर विघटनको सदर/बदर गर्ने अन्तिम निर्णयकर्ता सर्वोच्च अदालत हो। अहिले हामीले संविधानमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार छैन भनिरहेका छौं। त्यसैगरी सर्वोच्चले गर्ने फैसला मान्दैनौं त भनेका छैनौं। मान्दैनौं भन्यौं भने त्यो गैरसंवैधानिक हुन्छ।
कांग्रेसले संविधानको कदर गरेको छ। सर्वोच्चको फैसलाको पनि सम्मान गर्ने भनेकै छौं। जुनसुकै परिस्थितिका लागि कांग्रेस तयार छ। यति भनिसकेपछि हामी कहाँ अस्पष्ट भयौं? संविधान अनुसार गर्छौं भन्नु अन्योल हो? संविधानले सर्वोच्चलाई दिएको अधिकार विपरीत हाम्रो धारणा ‘यो हो, फैसला मान्दैनौं' भन्न मिल्छ? पद्धति, संविधान, लोकतान्त्रिक विधि मार्फत हामी चलेका छौं। पार्टीको दृष्टिकोण जनताकहाँ पनि राखेका छौं। पार्टी तहमा राखेका छौं। सर्वोच्चको फैसला मान्छौं भन्नु स्पष्ट हुनु हो।
कांग्रेसभित्रै एउटा शब्द अहिले चर्चामा छ- 'लड्डु कांग्रेस'। जता फाइदा हुन्छ, उतै जाने। त्यस्तो चरित्र किन बन्यो?
भोलि सरकारले अरु असंवैधानिक कदम चाल्ला रे। अथवा, कुनै किसिमको 'कू' नै होला रे। त्यतिबेला पनि तपाईंहरु राजनीतिक पार्टीको रुपमा प्रष्ट धारणा सार्वजनिक नगरेर अदालतकै निर्णय कुरेर बस्नुहुन्छ हो?
अहिले कम्युनिस्ट पार्टी नफुटेको भए उनीहरु फुटेका छैनन्, हामी हार्छौं त्यसैले चुनावमा जाँदैनौं भन्थ्यो र? २०७४ सालमा पनि उनीहरु मिले त्यसैले हामी चुनावमा जाँदैनौं भन्यौं र? हामी त उहाँहरु एक्लै भए पनि चुनावमा जान्छौं। अहिले त उहाँहरु विधिवत् रुपले फुटेका छैनन् तर हामी चुनाव हुन्छ भने हामी जान्छौं भनिरहेका छौं। त्यसैले कम्युनिस्ट फुटिदेला र चुनावमा जाउँला भनेर कांग्रेस कुरेर बसेको होइन। कांग्रेस हार्ने डरले हतोत्साही हुने र जित्ने डरले उत्साही हुने पार्टी होइन। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार अगाडि हिँड्दै गर्दा निर्वाचन र अन्य समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति 'फेस' गर्ने हो।